Dowladda Farmaajo oo lagu eedeeyay xaraashka Shidaalka dalka | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda Farmaajo oo lagu eedeeyay xaraashka Shidaalka dalka
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa qoraal ay soo saareen, uga digay heshiisyada baarista iyo qodista Shidaalka dalka oo ay Dowladda la gaaleyso shirkaddo shisheeye.
MUQDIHSO, Soomaaliya - Musharaxiinta waxay ku sheegeen qoraalkood in Wasaaradda macdanta iyo batroolka ay dhawaan heshiis shidaal baaris ah la galayso shirakaddo laga leeyahay dalka dibadiisa.
Golaha ayaa ugu baaqay Hanti dhowrka iyo Xeer ilaaliyaha dalka in ay baaritaan ku sameeyaan heshiisyaddaan ay Dowladda Federaalka la galeyso Shirkaddaha Coastline oo horay loo oran jiray Som-Oil iyo shirkada Liberty.
“Dowlada Federaalka Soumaaliya iyo Dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah waxa ay 5-tii bishii June 2018 magaalada Baydhabo ku sixiixdeen Heshiiska Wadaaga kheyraadka dabiiciga ah, kaas oo dhigayay in heshiis walba oo la xiriira shidaal qodis, sahamin ama baaris uu noqdo mid daahfuran, laga dooday, la qiimeeyay, laguna heshiiyay, ugu danbeyna laga meelmariyay Golaha Shacabka ee DFS, kahor inta aan heshiiska la saxiixin” ayaa lagu yiri qoraalka.
Hoggaamiyeyaasha mucaaradka waxay ku eedeynayaan Farmaajo inuu doonayo ku shubasho codadka doorashadda, asigoo heshiisyaddaan cusub ku abaabulaya dib u doorashadiisa.
Shidaalka dalka oo la xaraashayo
Horaantii bishii December Keydmedia Online ayaa heshay macluumaad ku saabsan in magaaladda Istanbul ee dalka Turkiga ay ka socdaan kulamo lagu xaraashayo shidaalka Soomaaliya xili mudo-xileedka dowladda Farmaajo uu sii dhamaanayo.